क्यान्सरप्रति सचेतना आवश्यक | चितवन पोष्ट
गृह » क्यान्सरप्रति सचेतना आवश्यक
हिजो माघ २१ गते अर्थात् फेब्रुअरी ४ मा विभिन्न सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम गरी विश्व क्यान्सर दिवस मनाइएको छ । क्यान्सरबारे जतिसुकै सचेतना कार्यक्रमहरु हुँदै आए पनि क्यान्सर रोगको प्रकोप बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपालमा क्यान्सर रोग कसरी बढिरहेको छ र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरोकारवाला निकाय गम्भीर रहेको पाइँदैन । क्यान्सरबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान पनि हुन सकेको देखिँदैन । दुर्लभ र गम्भीर प्रकृतिका बाहेक धेरै क्यान्सरको उपचार नेपालमै सम्भव बन्दै गएको क्यान्सर विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन् । तर, क्यान्सर रोग किन बढिरहेको छ ? यसको रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्नेसम्बन्धमा भने विज्ञहरुले ठोस अनुसन्धान गर्न सकेको पाइँदैन । चितवनको यज्ञपुरीस्थित बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा मात्रै बर्सेनि एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा क्यान्सरका बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् । यसबाहेक, सरकारीस्तरमा वीर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल तथा निजीस्तरमा नेसनल क्यान्सर अस्पताल, जावलाखेल र नेपाल क्यान्सर अस्पताल, हरिसिद्धिमा समेत क्यान्सरको उपचार हुने गर्दछ । नेपालका सबै अस्पतालमा गरी बर्सेनि दुई लाखभन्दा बढीको संख्यामा क्यान्सरका बिरामीले उपचार गर्दै आएको पाइन्छ ।
चिकित्सकका अनुसार क्यान्सर निको हुने र नहुने कुन अंगको, कुन चरणको र कस्तो किसिमको भन्नेमा निर्भर रहन्छ । सुरूमै पहिचान हुन सके क्यान्सरको उपचार सम्भव हुन सक्छ । बहुआयामिक उपचारले कतिपय क्यान्सर पूरै निको नभए पनि बिरामीको आयु लम्ब्याउन सकिन्छ । क्यान्सर रोगबारे जतिसुकै उपचार सेवा विस्तार हुँदै गए पनि यसबारे जनविश्वास भने बढ्न सकेको छैन । नेपालमै उपचार गरेर निको भएका दृष्टान्त सार्वजनिक हुन नसक्दा क्यान्सरलाई निको नहुने असाध्य रोगका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ । नेपालमा क्यान्सर भएकामध्ये ६० प्रतिशतको उपचार बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमै हुने बताइन्छ । तर, आधुनिक उपकरण बिग्रिने र अत्यावश्यक नयाँ उपकरणहरु थप नहुने कारण बिरामीले सास्ती पाइरहेका छन् । क्यान्सर उपचार सेवालाई थप प्रभावकारी र विश्वासिलो बनाउन नसक्दा जनविश्वास गुम्दै गएको छ भने दक्षिण एसियाकै नमुना अस्पताल आफैँ क्यान्सरग्रस्त बन्न पुगेको छ । क्यान्सरबारे जनचेतना जगाउन सके समयमै पहिचान भएका अधिकांश क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव हुन सक्छ । तर, समयमै परीक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच नै सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन ।
सरोकारवाला निकाय जतिसुकै गम्भीर भएको देखिए पनि फेब्रुअरी ४ मा क्यान्सरविरूद्ध जागरण गर्नेबाहेक खास उपलब्धि केही देखिँदैन । वर्षको एकदिन दिवस मनाएरमात्रै क्यान्सरप्रति सचेतना जाग्दैन । वडा तहदेखि नै क्यान्सर रोकथामका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जतिसुकै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिए पनि गरिब जनताको पहुँच पुगेन भने त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको अधिकार भनिएको छ । क्यान्सरका कतिपय विषयहरु आधारभूत स्वास्थ्यअन्तर्गत नै पर्दछन् । तर, क्यान्सरको उपचार पहुँच र प्रभाव हुनेमै सीमित बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशतसम्म क्यान्सरका बिरामी बढिरहेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण, धूलो–धूवाँरहित वातावरण, विषादीरहित तरकारीको सेवन, जंकफुडको प्रयोग कम गर्न सकिए क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । क्यान्सरको रोकथामको पहिलो र सबैभन्दा उत्तम उपाय नै जनचेतना हो । स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सके हामी सहजै रोगविरूद्ध लड्न सक्ने भएकाले हरेक व्यक्ति क्यान्सरबारे सतर्क हुनु जरूरी देखिन्छ ।